के एसईओ सुझावहरू तपाइँका विशेषज्ञहरूले वेबसाइट मेनुका लागि सिफारिस गर्न सक्छन्?
साइट मेनु तपाईंको साइटमा नेविगेसनको लागि सबै भन्दा साधारण सहायता हो, र यो वेबसाइट उपयोगिता र प्रयोगकर्ता मित्रतामा प्रत्यक्ष सीधा प्रभाव छ।. जब प्रयोगकर्ताहरूले वेब स्रोतको साथ अनुभव गर्दछन् Google ले महत्त्वपूर्ण रैंकिंग कारकको रुपमा लिन्छ, तपाईंलाई वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको यस पक्षमा योगदान दिन आवश्यक छ. त्यसोभए, यदि तपाईं सोचिरहनुभएको छ किनकि तपाईको साइटले कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्दैन, यो समय तपाईसँग रहेको नेभिगेसनको विभिन्न प्रकारको कठिन दृष्य लिने समय हो।. यदि तपाईंको साइट आकर्षक छ, यसको अर्थ यो नेभिगेट गर्न सजिलो छैन. यदि तपाइँका आगन्तुकहरू र सम्भावित ग्राहकहरूले वेबसाइट वरिपरि केही विशिष्ट उत्पादनहरू वरिपरि आफ्नो मार्ग पत्ता लगाउन सक्दैनन् भने, तपाईंले पुनः डिजाईन प्रदान गर्न वा तपाईँको साइट नेभिगेशन सरल गर्न आवश्यक छ। - umzug spiegel verpacken. यसले तपाईंको उछाल दर सुधार गर्न र रूपान्तरण वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ. एक कुञ्जी नेभिगेसन मेनु बिना, तपाईंको वेबसाइट एसईओ बेकार हुन सक्छ. तपाईं आफ्नो संभावित ग्राहकहरु लाई भ्रमित गर्न र आफ्नो प्रतियोगी वेब स्रोत मा स्विच गर्न को लागी जोखिम हो. यो छोटो मार्गदर्शकमा, तपाईंले केहि उपयोगी सुझावहरू पाउनुहुनेछ कि कसरी इष्टतम वेबसाइट नेभिगेसन मेनु सिर्जना गर्ने र तपाईंको साइट एसईओ सुधार गर्नुहोस्.
तपाईं वेबसाइट एसईओ सुधार
ओभरलोड नगर्नुहोस् ) यो मान्य छ कि वेबसाइट मा केवल एक मेनू हुनु पर्छ. सबै आधुनिक वेबसाइटहरूमा वेबसाइटमा माथिल्लो पट्टीमा सहयोगी साना लिङ्कहरू हुनुपर्छ. यी लिङ्कहरूले साइट संरचना ढाक्नु पर्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकतामा एक पटक भेट्टाउन सक्षम पार्दछ. अधिकतर अवस्थामा, ई-वाणिज्य वेब स्रोतहरूमा दुई मेनु पट्टीहरू छन्. पहिलोमा मुख्य रूपमा साइट पृष्ठहरू र सेक्सनहरू मार्फत नेभिगेसनलाई बुझाउँछ, जबकि अर्को पट्टी बाह्य पृष्ठहरूमा लिङ्कहरू जस्तै सोशल मिडिया प्रोफाईल वा न्यूजलेटर सब्सक्रिप्शन समावेश गर्दछ।. म तपाईलाई एक मेनूमा सबै चीज राख्नदेखि सल्लाह दिन्छु. अन्यथा, तपाईंको मुख्य मेनूमा तपाईंको ढाँचाको खराब प्रतिबिम्ब हुनेछ. तपाईँको वेबसाइट नेभिगेसन मेनु सिर्जना गर्दा, तपाइँलाई सबैभन्दा सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण जानकारी साथै तपाईंको व्यापारिक लक्ष्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ. उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ आफ्ना ग्राहकहरूलाई ई-मेल वा फोन नम्बरबाट सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने, साइट हेडरमा "सम्पर्क" लिंक राख्नुहोस्।.
सबैभन्दा सान्दर्भिक बटनहरू चयन गर्नुहोस्
आफ्नो साइट सुधार्न एसईओ, तपाईले तपाइँको बटनको लागि सबै भन्दा उपयोगी हुने बटनहरू छनौट गर्न आवश्यक छ। सम्भावित ग्राहकहरू. सबै भन्दा उपयुक्त बटन चयन गर्न, तपाईंलाई अनुसन्धान गर्न, तपाईँको वेबसाइट एनालिटिक्समा खरिद गर्न आवश्यक छ र कुन पृष्ठहरूमा उच्च प्रयोगकर्ताको माग छ भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक छ।. यस्ता बटनहरू "ग्राहक समर्थन," "एक क्लिकमा अर्डर गर्नुहोस्" "सदस्यता लिनुहोस्," "पोर्टफोलियो" आदि. तपाईंको मुख्य वेबसाइट मेनु पट्टीमा राखिएको छ. यी बटनहरूको गलत प्लेसमेन्टले तपाइँको व्यवसायलाई घृणा गर्दछ र उछाल दर बढाउन सक्छ. निश्चित रूपमा तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूलाई दायाँ बटनमा आकर्षित गर्न, तपाइँले तापम्याप प्रयोग गरेर तपाईंको सबै नेभिगेसन तत्वहरूको लोकप्रियता समीक्षा गर्न आवश्यक छ.